Nohamasinina fa hoe tsy manota
CONCERT FOLKLORIQUE MALGACHE ET GOSPEL AVEC CLUB MAD À MEYZIEU (LYON)
"Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesôsy, Izay nataon'Andriarnanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe: Izay mirehareha, aoka Jehovah no ho reharehany" -
1 Kôr. 1:30,31.
Hatreto dia mety ho haintsika ny manavaka ny fahamasinana marina sy sandoka. Tsy midika ho filazana am-bava sy fampianarana ny Tenin'Andriamanitra fotsiny ihany ny fahamasinana, fa fiainana araka ny sitrapony. Matoky tena, ary tsy mahatsapa ny fahaverezany ireo izay milaza fa tsy manota sy mirehareha ny amin'ny fahamasinany. Izy ireo dia mametraka ny fanahiny eo amin'ny petra-kevitra hoe: rehefa avy nanandrana ny herin'Andriamanitra manamasina izy ireo, dia tsy misy hatahorana intsony ny hahalavoany. "Fa milaza ny tenany ho manan-karena sy efa nihary fananana be izy ireo, ka tsy manan-java-mahory; kanjo tsy fantatr 'izy ireo, fa izy ireo no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka." Mahatsapa ny fahalemeny kosa ireo izay nohamasinina marina tokoa.
Mahatsapa ny fahalemeny izy ireo, ka mitady fahazavana sy fahasoavana ary hery eo amin'i Jesôsy, izay itoeran' ny fahafenoana rehetra, sy hany mamaly ny hetahetany. Noho ny fahatsapany ny tsy fahatanterahany, dia hotadiaviny ny fomba hanahafana kokoa an'i Kristy sy hivelomana araka ireo fitsipika ambaran'ny lalany masina. Izany fahatsapana mandrakariva ny tsy fahombiazana izany no hitarika azy ireo ho amin'ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra, ka ho hita amin'ny ohatra asehony ny fanatrehan'ny Fanahy Masina. Misokatra hanome izay ilain'ny fanahy noana sy mangetaheta ny haren'ny lanitra. Izay rehetra tahaka izany dia manana toky fa indray andro any dia hibanjina ny voninahitr'izany fanjakana izany, izay tsy mbola takatry ny eritreritra raha tsy amin'ny fomba tena manjavozavo fotsiny ihany.
Ireo izay nahatsapa ny herin' Andriamanitra manamasina sy manova dia tsy tokony ho latsaka ao amin'ny fahadisoan-kevitra mampidi-doza, dia ny fiheverana fa tsy manota izy ireo, ary efa nahatratra ny toerana ambony indrindra amin'ny fahatanterahana, ary lavitra tsy tratry ny fakam-panahy. Ny fahadiovana sy ny fahatsaran'ny toetran'i Kristy no fenitra kristianina eo anoloany. Isan' andro is,an'andro, dia mitafy fahatsarana vaovao izy, ary maneho hatrany, eny, hatrany hatrany, amin'izao tontolo izao ny endrik'Andriamanitra. - BE, 21 Feb. 1898.